Nexus4နှင့် HTC One ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း Androidsis
HTC One သို့မဟုတ် Nexus4သည်မည်သည့်ပိုကောင်းသနည်း။
စာပို့ | | HTC က, ကို Nexus
မကြာသေးမီအချိန်အထိဂူဂဲလ်၏ Nexus4ဖုန်းသည်ငွေကြေးတန်ဖိုးအရအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော်လည်းတိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီပေါ်ပေါက်လာသည်။ HTC က စျေးကွက်အတွင်းပိုင်နက်ပြန်လည်ရရှိရန်ဆန္ဒရှိပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးမှုကိုစတင်ခဲ့သည် HTC One ကို.
ဒီဖုန်းနှစ်လုံးရဲ့ဘယ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုပိုကောင်းအောင်နားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပရိုဆက်ဆာမှမျက်နှာပြင်နဲ့အတွင်းပိုင်းသတ်မှတ်ချက်များအထိ၎င်းရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအသေအချာဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ မစတင်ခင်သင်အကြိုက်ဆုံးရှိလား နှိုင်းယှဉ်?
2 ဘယ်လိုကြည့်သလဲ ခင်းကျင်းပြသခြင်း
စမတ်ဖုန်း၏စိတ်နှလုံးသည်၎င်းပရိုဆက်ဆာတွင်တည်ရှိသည် ကို Nexus4quad core chip ပါ ၀ င်သည် Qualcomm ၏ Snapdragon S4 Pro ကြိမ်နှုန်း ၁.၅ Ghz ဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အကုန်တွင်ရောင်းလိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းရောင်းလိုက်သောဖုန်းတစ်လုံးအတွက်မကောင်း။
ဤအတောအတွင်း HTC One သည်အပြောင်းအလဲစွမ်းအားaကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်တိုးတက်စေသည် Qualcomm Snapdragon 600 Core လေးခုနှင့်အတူ 1.9 Ghz အထိတိုးမြှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ။ ဤအပိုင်းတွင် HTC သည်အားသာချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Snapdragon ပရိုဆက်ဆာများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
La RAM ကို နှစ်ခုလုံး devices များ, သူတို့ကတန်းတူဖြစ်ပါတယ်2GB ဆက်ကပ်အပ်နှံထား လျှောက်လွှာအမြောက်အများကိုတစ်ပြိုင်တည်းလည်ပတ်နိုင်အောင်ပင်အရှိန်နှေးနှေးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊
ထပ်မံ၍ HTC One သည်အသစ်သောပုံစံဖြစ်ခြင်းကြောင့်အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည် 1920 × 1080 Pixels Resolution ရရှိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် X ကို 1280 768 Nexus4မှထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်း။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည်အလွန်ကွာခြားမှုမရှိပါ။ HTC model သည် ၄.၈ လက်မနှင့် Nexus 4,8 မှာ ၄.၇ သာဖြစ်သည်။
Nexus4အာရုံခံကိရိယာသည် 8 megapixels ဗွီဒီယိုကို Full HD high definition ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ HTC One ကို4megapixel အာရုံခံအလွှာလေးခုဖြင့်နည်းပညာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် 12 megapixels HTC သည် UltraPixel ဟုခေါ်ဆိုသောအရာတွင်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် operating system ၏မေးခွန်းရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် Nexus4အတွက်အားသာချက်မှာ၎င်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သောကြောင့်အခြား update များမတိုင်မီ Google updates ကိုလက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ HTC One တွင်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲပါရှိသည်။ သို့သော် Google ဖြစ်သည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုး စျေးကွက်တွင်အားသာချက်တစ်ခုရှိခြင်းနှင့်၎င်းကို Nexus လိုင်းနှင့်သိသာသည်။
ဘာဖုန်းကိုပိုနှစ်သက်သလဲ Nexus4သို့မဟုတ် HTC One?
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - HTC One၊ ၎င်း၏တရားဝင်ဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးကြည့်ပါ
ရင်းမြစ် - PhonesReview
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One သို့မဟုတ် Nexus4သည်မည်သည့်ပိုကောင်းသနည်း။
9 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
သူ Manuel ဟုသူကပြောသည်
4 x4= 16, မ 12
လူငယ် Torres ဟုသူကပြောသည်
ငါ NEXUS နှင့်အတူကျန်ကြွင်း။ LEBERADO အပြည့်အစုံ။ စျေးနှုန်း, အရည်အသွေးနှင့်အလှအပ။ US ကိုအသုံးပြုသူများအဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ အိုင်တီစင်ကြယ်သော ANDROID ကုမ္ပဏီရှိကုမ္ပဏီများ။
JUNIOR TORRES သို့ပြန်ပြောပါ
ခရစ် satilbo ဟုသူကပြောသည်
Nexus4ကာလတွင်မွမ်းမံမှုများအတွက်သာ။ 😉
Chris Satilbo အားပြန်ပြောပါ
၄ x ၄ က ၁၆ ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါဖတ်တဲ့အရာကအလွှာ ၃ ခုပါ၊ ပြီးတော့ ၁၂ ((၁၆) megapixels ပြောတာဟာလုံးဝမမှန်ကန်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် (interpolated မှလွဲ၍) သင်ရိုက်မည့်ဓာတ်ပုံများတွင်အာရုံခံကိရိယာရှိသည့် megapixels များရှိသည်။
Jesus Jimenez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ Nexus4သည်ယူရို ၃၀၀ နှင့် HTC One သည်နှစ်ဆပိုများသည်ကိုသိထားသည့်အတွက် Nexus 300 သည်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ကိုသိထားသည်။
လုံးဝ။ HTC One သည်အနည်းငယ်သာလွန်သော်လည်းအနည်းငယ်သည် Nexus4၏စျေးနှုန်းထက်နှစ်ဆမျှမကျပါ။
Edgar pons ဟုသူကပြောသည်
htc တစ်ခုကယူရို ၃၀၀ ကုန်ကျမလား။
Edgar Pons အားပြန်ကြားပါ
Francisco Ruiz ဟုသူကပြောသည်
မဟုတ်ပါ၊ ခန့်မှန်းခြေယူရို ၅၀၀ ကုန်ကျသည်
Francisco Ruiz ကိုပြန်သွားပါ
Sergio Albert ဟုသူကပြောသည်
ယူရို ၅၀၀ နဲ့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တာလဲ
ငါထင်တာ ၆၀၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်၊ ငါ့ကိုငါစိတ်ဝင်စားတဲ့လင့်ခ်တစ်ခုပို့ပေးလိုက်။
Sergio Albert ကိုပြန်ပြောပါ
MWC 2013, Geeksphone သည် Firefox OS သုံးစမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုပြသသည်
Alcatel မှ MWC 2013 တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်နှစ်လုံးပြသမည်